Dunterton, England, United Kingdom
Ifama sinombuki zindwendwe onguJenny
I-Wrixhill Farmhouse yindlu yaseDevon Longhouse emi kwifama kumda weDevon kunye neCornwall. INorth Cornwall, kunye neelwandle zayo ezinomtsalane, kukuhamba ngemizuzu engama-45 kuphela kwaye iTavistock kunye neDartmoor yimizuzu engama-20 kuphela kwicala elichaseneyo. Indlu yasefama ibekwe ecaleni kwenduli kwaye yonwabela iimbono ezintle kuyo yonke iTamar Valley nangaphaya kweCornwall. Ipropathi ngokwayo ixhotyiswe kakuhle kwaye inovakalelo lwe-rustic.
Kwindlu yasefama kulungiselelwe amaqela azo zonke iisayizi ezifumanekayo xa uceliwe.
I-Wrixhill Farmhouse yindlu yaseDevon Longhouse enemiqadi, ii-logburners kunye nezinye izinto ezininzi zantlandlolo. Ezantsi kukho igumbi eliluncedo, ikhitshi elikhulu elinetafile ekhitshini ene-oveni ezintlanu iAga, amagumbi amabini okwamkela iindwendwe zombini aneendawo zokubasa. Phezulu kukho amagumbi okulala amakhulu amane; ezimbini ezineen-suti, kunye negumbi lokuhlambela losapho.
Ipropathi inkulu ngokwaneleyo ukuba ikwazi ukuhlala ngokukhululekileyo abantu abasi-8 kodwa isondelelene ngokwaneleyo kwizibini ezifuna ukubaleka ezilalini ezipholileyo.
I-Wrixhill Farmhouse isekwe kumda we-Devon/Cornwall kwaye ibekwe ngokukodwa ukubonelela ngoxolo noxolo ngemibono ebalaseleyo yelizwe eliqengqelekayo elifikelela ngaphaya kweNtlambo yaseTamar nangaphaya kweCornwall. Siyazamkela izinja kwaye kukho iihambo ezintle ezinokuthi zenziwe kanye ukusuka emnyango ukuya efama kunye nokunqumla emasimini. Iilwandle zonxweme lwaseNorth Cornwall ziyimizuzu engama-45 kuphela yokuqhuba kwaye idolophu entle yentengiso yaseTavistock ikwicala elichaseneyo ngemizuzu engama-20 kuphela yokuqhuba. ITavistock lisango eliya eDartmoor elimnandi ukuhamba, ii-pubs, ukukhwela ibhayisekile nokunye okuninzi. Kufuphi nendlu yasefama yindawo entle yokukhwela yangaphakathi (kwimizuzu nje emibini kude) kunye neTamar Trails elungele ukuhamba kunye nokukhwela ibhayisekile kuyo yonke iminyaka emahlathini ecaleni komlambo iTamar.
Sihlala kumgama oziikhilomitha kwaye siyafumaneka nanini na kufuneka. Siya kuhlala sisamkela iindwendwe ukuba ziqhube ngokufudumeza / zinikeze izitshixo njl.
Kananjalo siyakwazi ukubonelela ngokutya kwendlu xa sicelile. Ukutya okusandula ukuphekwa, okwenziwa ekhaya kusetyenziswa imveliso evela efama (oko kukuthi iWrixhill venison kunye nenyama yebhokhwe, kunye netshizi yebhokhwe, ikhrimu emhlophe yebhokhwe kunye nesonka sebhokhwe sebhokhwe) kunye nemveliso yalapha ekhaya ingenziwa kumaqela azo zonke iisayizi ukuba zifunwa. Kufuneka kujongwe ukufumaneka kuqala.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dunterton